Maamulka Somaliland oo ku tilmaamay mid qalad ah eryida Nicholas Haysom | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Maamulka Somaliland oo ku tilmaamay mid qalad ah eryida Nicholas Haysom
Maamulka Somaliland oo ku tilmaamay mid qalad ah eryida Nicholas Haysom
Maamulka la magac baxay Somaliland ayaa ka hadlay mowqifka ay dowlada Federalka Soomaaliya ka gaartay ergeygii gaarka ahaa ee Qaramada Midoobay ee dalka Soomaaliya Nicholas Haysom taasoo ay ku amartay in uu dalka isaga baxo.
Qoraal ka soo baxay Maamulka Somaliland ayaa lagu sheegay in ergeyga Qaramada Midoobay uu howl wanaagsan qabtay mudadii koobneyd ee uu howsha ku jirey ayna ka xun yihiin habka ay dowlada federalka ula dhaqantay.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu xusay in Maamulka Somaliland uusan quseyn go’aanka ay gaartay dowlada federalka Soomaaliya.
Illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Maamul goboleedyada kale eek a jira dalka taasoo ay ku taageerayaan amaba ay ugaga soo horjeedaan go’aanka ay Wasaarada Arrimaha Dibbada ka gaartay Nicholas Haysom.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka ka soo baxay Maamulka Somaliland;
Previous articleDuqa Muqdisho iyo Wasirika Qorsheynta oo ka wadahadlay qorshaha Horumarinta qaranka
Next articleGolaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada oo ka soo horjeestey ceyrintii Nicholas Haysom